Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးတစ် Key ကိုအာမခံ (2013) အဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်အက်ဥပဒေချီး
ဒီလေ့လာမှုက DeltaFosB အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် DeltaFosB ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လူသိများစံမော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလိင်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့တူညီသောတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် DeltaFosB သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ထိုစက်ရုပ်ကိုပင်ပြန်ပေးဆွဲသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်၊ တူညီသော circuit များ၊ တူညီသောယန္တရားများ၊ တူညီသောဆယ်လူလာပြောင်းလဲမှုများ၊
J ကို neuroscience ။ 2013 Feb 20;33(8):3434-3442.
အိုး KK, Vialou V ကို, Nestler EJ, Laviolette SR, Lehman MN, Coolen LM.
ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ၊ Schulich ဆေးပညာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း၊ Western Ontario တက္ကသိုလ်၊ London၊ Ontario N6A 3K7, Canada, Molecular & Integrative Physiology ဦး စီးဌာန၊ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်၊ Ann Arbor, Michigan 48109၊ ဦး နှောက်အင်စတီကျု၊ သိနာတောင်ဆေးကျောင်း၊ နယူးယောက်၊ နယူးယောက် ၁၀၀၂ နှင့်အာရုံကြောဗေဒနှင့်ခန္ဓာဗေဒသိပ္ပံနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဇီဝရူပဗေဒဌာန၊ မစ္စစ္စပီဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ဂျက်ဆင်၊ မစ္စစ္စပီ 10029 ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ, သဘာဝဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း, အထူးနျူကလိယ accumbens (NAc) တွင် neuroplasticity သွေးဆောင်။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အတူ shared plasticity ၏ယန္တရားများကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည် NAc အလားတူပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအကြံပြု, နှင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားထူးခြားသောဆက်စပ်မှုတွေအဘို့ခွင့်ပြု.
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင်ဆုလာဘ်များဆုံးရှုံးမှုတိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရွေ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောအခါသရုပ်ပြနိမ့်ထိုးဘို့အထိခိုက် conditional ရာအရပျ preference ကိုအားဖြင့်ညွှန်ပြတိုးမြှင်စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်, (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) စိတ်ကြွဆေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပွငျတိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်စတင်ခြင်း, ဒါပေမယ့်မရေရှည်စကားရပ်သည် NAc အတွက် dendritic ကျောရိုးတစ်ယာယီတိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်များနှင့် NAc အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုးထဲမှာဆက်နွယ်တိုးအဓိက-အနုတ်လက္ခဏာစည်းနှောင်မိတ်ဖက်ΔJunD၏ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုဗီဇလွှဲပြောင်းသုံးပြီးထူထောင်ခဲ့သည်အတွက်ကူးယူအချက်ΔFosBများအတွက် Next ကိုတစ်ဦးဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ။ ထို့အပွငျကအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးမြှင်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာΔFosBနှင့် spinogenesis အဆိုပါ NAc အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် dopamine D1 အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြောင်း။ သရုပ်ပြခဲ့သည် Pharmacological D1 အဲဒီ receptor ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ဒါပေမယ့်မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း NAc အတွက်အဲဒီ receptor D2 ΔFosBသော induction attenuated နှင့်တိုးချဲ့ spinogenesis နှင့်ထိခိုက်စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်တားဆီး။
Together ဤတွေ့ရှိချက်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်အပြုအမူတွေကိုမူးယစ်ဆေးစွဲမှအားနည်းချက်ထိန်းချုပ် plasticity ၏ဘုံမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများအပေါ်ပြုမူ, ဤတိုးမြှင့်အားနည်းချက်ΔFosBနှင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပစ်မှတ်ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကို (နျူကလိယ accumbens ထားတဲ့အတွက် mesolimbic dopamine (DA) စနစ်, (NAc) ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍတစ်ဘုံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံကယ်လီ, 2004) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးစွဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် putative အခန်းကဏ္ဍသော mesolimbic စနစ်, (အတွင်း neuroplasticity သွေးဆောင်Hyman et al ။ , 2006; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Kalivas, 2009; ချန် et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ဝံပုလွေ, 2010a; Mameli နှင့် Luscher, 2011). ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်ဟာ mesolimbic စနစ်အတူတူပင်အာရုံခံကိုသက်ဝင်ကြဘူးကြောင်း, ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထူးခြားသက်ဝင်စေကြောင်းနှင့်ဤ circuit ကိုပြောင်းလဲပစ်တွေးဆထားသည် (ကင်မရွန်နှင့် Carelli, 2012) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်သဘာဝကဆုလာဘ်များအကြားတစ်ခုဆက်စပ်မှုတွေအဘို့ခွင့်ပြုကြောင်းအလားတူနှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနှစ်ဦးစလုံးအတွက် mesolimbic system ကိုထိခိုက်စေသည်ဟု ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, အထူးသလိင်ဆုလာဘ်, နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှု (Frohmader et al ။ , 2010a; အိုး et al ။ , 2010a; Olsen, 2011).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းကြိုးဖြစ်ပါသည် (Tenk et al ။ , 2009),
နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြွဆေးမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive (Amph) အပါအဝင်ထိခိုက်မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေ, locomotor လှုပ်ရှားမှု -induced ဖြစ်ပေါ်စေသည် (Bradley နှင့် Meisel, 2001; အိုး et al ။ , 2010a)
နှင့်မြှင့်တင်ရန် Amph ဆုလာဘ် (အိုး et al ။ , 2010a).
ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအားတိုးမြှင့် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအပါအဝင် psychostimulant ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင့်ဆင်တူသည့် NAc အတွက်အာရုံကြော plasticity, induces (Meisel နှင့် Mullins, 2006; အိုး et al ။ , 2010a),
အချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုပြောင်းလဲနှင့် prefrontal Cortex-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ကျ (အိုး et al ။ , 2012).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေ abstinence ၏ကာလကိုတိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်, NAc spinogenesis များအတွက်အရေးပါဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည် (အိုး et al ။ , 2010a), နှင့်အချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှု (အိုး et al ။ , 2012).
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှရသောအလှည့်များတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားနည်းချက်, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံများအာရုံကြော plasticity ၏ဘုံယန္တရားများကိုမျှဝေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်အလှည့်အကြောင်းမရှိအတွက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ထားတဲ့လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် plasticity, ဖြန်ဖြေဆယ်လူလာယန္တရားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သောကွောငျ့အထူးသဖြင့်ကူးယူအချက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုΔFosBစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် (Nestler et al ။ , 2001; Werme et al ။ , 2002; Olausson et al ။ , 2006; Wallace et al ။ , 2008; ခွံရှိ et al ။ , 2009; အိုး et al ။ , 2010b). psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေး D1R ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ပြီးနောက်အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်အာရုံကြော plasticity များအတွက် dopamine D1 receptors (D1R) ၏အခန်းကဏ္ဍ NAc ΔFosBသော induction နှင့်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆဘာလို့လဲဆိုတော့လေ့လာခဲ့သည် (Lee က et al ။ , 2006; ကင်မ် et al ။ , 2009) နှင့် D1R activation အပေါ်မှီခို (Zhang က et al ။ , 2002).
ဤတွင်ကျနော်တို့တိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်အပေါ်ဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-မလွဲမသွေသက်ရောက်မှုတစ်ခုကကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့တစ်ΔFosBများအတွက်ကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာစည်းနှောင်မိတ်ဖက်, diOlistic တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး၏ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated စကားရပ်ကိုသုံး အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ D1R-မှီခိုသော induction နှင့် NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၏နောက်ဆက်တွဲတိုး။ အတူတူ, တွေ့ရှိချက်မှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ဟာအရေးပါတဲ့ဖျန်ဖြေအဖြစ်ΔFosBအတူအာရုံကြော plasticity ၏ဘုံယန္တရားများကိုမျှဝေကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ 225-250 ဆ) နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို (210-220 ဂရမ်) Sprague Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories) အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆစည်းမျဉ်းအောက်မှာနှင့် 12 / 12 ဇပေါ်တွင်စမ်းသပ်ချက်တစ်လျှောက်လုံးအတူတူလိင်အားလုံးအတွက် Plexiglas လှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် အစားအစာနှင့်ရေလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်နှင့်အတူအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများဘို့အမျိုးသမီးမိတ်ဖက် ovariectomized တို့ 5% estradiol benzoate (Sigma-Aldrich) နှင့် (နှမ်းဆီ 500 ml ကိုပြခြင်း, Sigma-Aldrich) အဓိကချို့ယွင်း၏ 0.1 μg၏ထိုးပါဝင်သောအရေပြားအောက်ဆုံး implants လက်ခံရရှိစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ4ဇ။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအနောက်တိုင်းအွန်နှင့်မီချီဂန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြုခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များအမျိုးသား Institutes အပေါ်ကနေဒါကောင်စီတညီတည်းခဲ့ကြသည်။
မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ (2 ×6× 60 စင်တီမီတာ) စင်ကြယ်သောစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာမှိန်အနီရောင် illumination အောက်မှာ (အမှောင်ထဲမှာကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက် 45 နှင့် 50 ဇအကြား) ကိုအစောပိုင်းမှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထီးကြွက်4သို့မဟုတ်5နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ။ ကျွန်တော်ယခင်ကဤပါရာဒိုင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းပြသနေသောကြောင့်ငါးအစည်းအဝေးများရှေးခယျြခဲ့သညျအိုး et al ။ , 2010bAmph locomotor လုပ်ဆောင်မှု), လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive (အိုး et al ။ , 2010a), နှင့်ဆုလာဘ် (အိုး et al ။ , 2010a) ။ ကျွန်တော်ယခင်ကကြောင့် Amph locomotor ာင်းအပေါ်လိင်အတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပြသသောကွောငျ့သုတ်ရည်လွှတ်ချင်းစီမိတ်လိုက် session ရဲ့အဆုံးမှတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည် (အိုး et al ။ , 2010a), အရာတိရိစ္ဆာန်များသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုမပါဘဲအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကို (ဆိုလိုသည်မှာပထမဦးဆုံး mount မှအောင်းနေချိန်, intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, ဘယ်အရာမှမပါဘဲနှင့် intromissions အရေအတွက်) (မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်အိုး et al ။ , 2010b) ။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အဘို့, လိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများလိင်အပြုအမူများအတွက်ကိုက်ညီခဲ့သည် (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်အောင်းနေချိန်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသုတ်ရည်လွှတ်မှတစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာ) ။ ပဉ်စမမိတ်လိုက်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, ယောက်ျားအတူတူလိင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသျောနှင့် 1, 7, ဒါမှမဟုတ် 28 ဃ၏လိင် abstinence ကာလအတွင်းမှာမိတ်ခွင့်မပြုခဲ့ကြနျြရစျ။ လိင်နုံကြွင်းသောတိရိစ္ဆာန်များလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားကဲ့သို့တူညီသောအခန်းကိုင်တွယ်နှင့်သျောခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နုံထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုလက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲ,5ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်းတစ်နာရီအဘို့သန့်ရှင်းသောစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာထားကြ၏။
တိရစ္ဆာန်များနက်ရှိုင်းစွာထုံဆေးခဲ့ကြ (ဆိုဒီယမ် pentobarbital; 390 / ကီလိုဂရမ် mg; ip) နှင့် 50% ဆား၏ 0.9 ml နှင့်အတူ intracardially perfused ကာလအချိန်များအတွက် 500 မီတာဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB) တွင် 4% paraformaldehyde (Sigma-Aldrich) ၏ 0.1 ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ပွိုင့်ခြင်းနှင့် DR ရန်စမ်းသပ်ချက်။ ဦးနှောက် 1% sucrose နှင့်4မီတာ PB အတွက် 20% ဆိုဒီယမ် azide အတွက် 0.01 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားပြီးတော့, ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူတူပင် fixative အတွက်အခန်းအပူချိန်မှာ 0.1 ဇများအတွက် postfixed ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DR ရန်စမ်းသပ်ချက်အဘို့, ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်နှင့် sagittal ဝင်ရိုးတလျှောက်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွား။ တဦးတည်းတစ်ဝက် PB ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့် DiOlistics အတှကျအသုံးပွုနှင့်အခြားသောΔFosBများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (35 μm) cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်လေးအပြိုင်စီးရီး (400% sucrose နှင့် 30 မီတာ PB အတွက် 30% Ethylene glycol) တွင်စုဆောင်း -0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား, တစ်ဦးအေးခဲနေသော microtome (Microm H20R) နဲ့ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အခမဲ့-floating ကဏ္ဍများပေါက်ဖွားအကြား, 0.1 မီတာ PBS, သော pH 7.35 နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ကိုဆေးကြော, လူအပေါင်းတို့ခြေလှမ်းများအခန်းအပူချိန်မှာကြ၏။ ကဏ္ဍများ% H ကို 1 ထိတွေ့ခဲ့သည်2O2 (10 မိ) နှင့်ပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက် (1 ဇနှင့် 0.1% ထရီ X-0.4, Sigma-Aldrich; PBS 100% BSA, Fisher က်) ။ ကဏ္ဍများထို့နောက်ဒယ်အိုး-FosB ယုန် polyclonal antibody ကိုအတွက်နေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် (1: 5K; SC-48 Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ) ယခင်ကအတည်ပြု, (Perrotti et al ။ , 2004, 2008; အိုး et al ။ , 2010b) ။ The Pan-FosB ပantibိပစ္စည်းသည် FosB နှင့်ΔFosBတို့မျှဝေထားသောပြည်တွင်းရေးဒေသတစ်ခုတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးယခင်က studyFosB ဆဲလ်များကိုဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောအချိန်၌ (အထူးသဖြင့်နှိုးဆွမှုပြီးနောက် ၁ d) တွင်မြင်ယောင်စေခဲ့သည်။Perrotti et al ။ , 2004, 2008; အိုး et al ။ , 2010b) ။ , avidin-ဓါတ်-horseradish peroxidase (1 ဇ; Credit: ABC အထက်တန်းလွှာ; 1: PBS အတွက် 500; Vector Laboratories): ယင်းနောက်ကဏ္ဍများကိုဓါတ်-conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် IgG (;; PBS + အတွက် 1 Vector Laboratories 1 1000 ဇ) နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (0.02%) နှင့်အတူ 3,3 မီတာ PB အတွက် 10% နီကယ် sulfate နှင့်အတူ; နှင့် 0.02% 0.1'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (Sigma-Aldrich 0.015 မိ) ။ ကဏ္ဍများ Superfrost ပေါင်းဖန်ဆလိုက် (Fisher က) ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် dibutyl Phthalate xylene နှင့်အတူ coverslipped ခဲ့ကြသည်။
ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (400 × 600 μm) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစံဒေသများအတွင်း NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်ရေတွက်ခဲ့သည်အိုး et al ။ , 2010b) ။ နှစ်ဦးအားပုဒ်မ NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနှုန်းကိုရေတွက်ခဲ့ကြ, တိရစ္ဆာန်နှုန်းပျမ်းမျှ။ အချိန်ကိုမှတ်စမ်းသပ်မှုများတွင်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို unpaired သုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအချိန်အမှတ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းများအတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်နုံအုပ်စုများအကြားသင့်လျော်သောအချိန်အမှတ်မှာနုံထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏တစ်ခြံအပြောင်းအလဲအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t တစ်အရေးပါမှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု p <0.05 ။ ΔJunD-AAV နှင့် DR ရန်ဖက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင်နှစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်လမ်း ANOVA အသီးသီးနှင့် Holm-Sidak နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် osFosB-IR ဆဲလ်များကို dorsal striatum (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်:ရိယာ - 200x600 μm) တွင်လည်းကောင်း၊ NAc နှင့်ချက်ချင်းဆုံမိခြင်းနှင့်ဘေးတိုက် ventricle တွင်ကပ်ထားသော DR antagonist စမ်းသပ်မှုရှိတိရစ္ဆာန်အားလုံးတွင်ရေတွက်ခဲ့သည်။ One-way ANOVA နှင့် t စမ်းသပ်မှုအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အချိန်ကိုမှတ်နှင့်ΔJunDဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်, ကြွက် 50 မီတာ PB အတွက် 0.9% paraformaldehyde ၏ 500 ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်2ml ကိုဆား (0.1%), နှင့်အတူ intracardially perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 0.1% ဆိုဒီယမ် azide နှင့်အတူ 0.01 မီတာ PB ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့တစ် vibratome (Microm) နှင့်ပုဒ်မကိုသုံးပြီး (4 μm Coronal) sectioned ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ lipophilic carbocyanine ဆိုးဆေး DiI နှင့်အတူအဖြိုက်နက်အမှုန်၏အပေါ်ယံပိုင်း (1.3 μmအချင်း, Bio-Rad) (1,1'-dioctadecyl-3,3,3'3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate; Invitrogen) (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Forlano နှင့် Woolley, 2010) ။ DiI-coated အဖြိုက်နက်အမှုန် 160 μmပေါက်အရွယ်အစား (bd Biosciences) နဲ့တစ်ဦး filter ကိုကနေတဆင့် Helios Gene ဂွန်စနစ် (Bio-Rad) ကို အသုံးပြု. 180-3.0 psi မှာတစ်ရှူးသို့အပ်ခြင်းနှင့်အဘို့အ 0.1 မီတာ PB အတွက်အာရုံခံအမြှေးပါးများကို ဖြတ်. ခွင့်ပြုခဲ့သည် 24 ဇ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအလင်း-protected နေစဉ်။ ထို့နောက်အချပ် (PB အတွက်ကိုဆေးကြောတဲ့အခန်းအပူချိန်မှာ4ဇများအတွက် PB အတွက် 3% paraformaldehyde အတွက် postfixed နှင့် gelvatol anti-နွမ်းအေးဂျင့် 1,4-diazabicyclo (2,2) ကထုတ်တဲ့င်တွေနဲ့ဘောင်-တံဆိပ်ခတ်အခန်းများ (Bio-Rad) တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည် 50 (/ ml, Sigma-Aldrich) mgLennette, 1978).
DiI-label တပ်ထားသောအာရုံခံသုံးပြီး imaged ခဲ့ကြသည် Zeiss LSM 510 မီတာ confocal ဏု (Carl Zeiss) နှင့်ဟီလီယမ် / နီယွန် 543 nm လေဆာ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အဘို့, တစ်ဦးချင်းစီ NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်, သို့မဟုတ် (ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle နှင့် anterior commissure အပါအဝင်အထင်ကရအဆောက်အစပ်လျဉ်းတည်နေရာပေါ် အခြေခံ. ) အခွံထဲမှာΔJunD-AAV နှင့် DR ရန်စမ်းသပ်မှုအတွက် 2-5 အာရုံခံ, တစ်ဒေသနေရာချထားရန်အသုံးပြုခဲ့ကြ ကျောရိုးအရေအတွက်တစ်စက္ကန့်အမိန့် dendrite အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံခံဆဲလျအဘို့, 2-4 dendrites 40-100 μmစုစုပေါင်း dendritic အရှည်များကိုတွက်ချက်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ Dendritic segments များဟာတလျှောက် 40 μmကြားကာလမှာရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ× 0.25 သုံးပြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့သည် z(-axis နှင့် 3D ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်Zeiss) နှင့်ယူခဲ့ deconvolution (Autoquant X ကို, မီဒီယာဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေး) ဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်သပ္ပါယ် (မျက်စိကန်း) နှင့်သီအိုရီ PSF setting ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ Imaris software ကိုအထုပ် (ဗားရှင်း 7.0, Bitplane) ၏နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ module ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့သည်။ dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်များ, 10 μmနှုန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံခံဆဲလျအဘို့အပျမ်းမျှပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်ΔJunDစမ်းသပ်ချက် (အချက်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် vector) ၌၎င်း, တဦးတည်း: စာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုစီကိုအချိန်မှတ်မှာလိင်နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအကြားအချိန်စီးရီးစမ်းသပ်ချက် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအချက်များ) တွင် Two-လမ်း ANOVAs သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည် အဆိုပါ DR ရန်စမ်းသပ်မှုအတွက် ANOVA -way ။ Group မှနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအဓိပ်ပာယျအဆငျ့အတူ Holmes-Sidak နည်းလမ်းနှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြ p <0.05 ။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါ CPP ကစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း (တူညီခဲ့သည်အိုး et al ။ , 2010a), D-Amph sulfate (Amph ၏တစ်ခုတည်းသောတွဲဖက်မှုအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အတူတစ်ဦးဘက်မလိုက်သုံး-အခန်းယန္တရား (Med Associates မှ) နှင့်ဘက်မလိုက်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. ; Sigma-Aldrich; 0.5 အခမဲ့အခြေစိုက်စခန်း၏အခြေခံပေါ်မှာတွက်ချက်မီလီဂရမ် / ml / ကီလိုဂရမ် SC) အခြားရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း unpaired အခန်းတွဲအခန်းထဲကနှင့်ဆား၌၎င်း, အလငျးအဆင့်၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအခန်းဆားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အချိန်ကိုလွန်စမ်းသပ်အနုတ်အဆိုပါ pretest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်း (စက္ကန့်) သုံးစွဲအဖြစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီရမှတ်များတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ one-way ANOVAs နှင့် Holmes-Sidak နည်းလမ်းကိုအချိန်ကိုမှတ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Unpaired t မှာသတ်မှတ်ထားအရေးပါမှုနှင့်အတူစမ်းသပ် p <0.05 ကို Naive-Sal နှင့် Naive Amph တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီ၏အချိန်နှင့်ΔJunDစမ်းသပ်မှုတွင်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းခြင်းကုသမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အချိန်စမ်းသပ်မှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောအုပ်စုများ (Exp-Sal၊ ၇dExp Amph နှင့် ၂၈ Exp Exp Amph) နှင့်အငြင်းပွားမှုမရှိသော ANOVA များနှင့် Holm-Sidak နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ t စမ်းသပ်မှု2နုံအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ Two-လမ်း ANOVA နှင့် Holmes-Sidak နည်းလမ်း DR ရန်စမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ unpaired နှစ်ဦးကို t ဒေတာ ANOVA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ခွင့်ပြုပါရန်ΔJunDအုပ်စုများအတွက်လွန်း variable ကိုကဲ့သို့စမ်းသပ်စီဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုကုသမှုအခြေအနေ (GFP သို့မဟုတ်ΔJunD) နဲ့နုံ-Sal နှင့်နုံ Amph အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအဓိပ်ပာယျအဆငျ့မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05 ။
viral vector စမ်းသပ်ချက်။
နှင့် xylazine (87 မီလီဂရမ် / ml / ကီလိုဂရမ် ip) တစ်ဦး stereotaxic ယန္တရား (Kopf တူရိယာ) သို့နေရာချခြင်း, ကုဒ်သွင်း recombinant adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် microinjections လက်ခံရရှိ; အထီးကြွက် ketamine (ip 13 မီလီဂရမ် / ml / kg) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည် 1.5 တစ် volume ထဲမှာ,: အ NAc (ဦးခေါင်းခွံကနေ DV -1.2 AP + 7.6, bregma ထံမှ ML ± 1.5 သြဒီနိတ်) သို့ GFP သာ (အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း), သို့မဟုတ်ΔJunD (ΔFosB၏ကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာစည်းနှောင်မိတ်ဖက်) နှင့် GFP, တစ်ဦး Hamilton ကပြွတ် (ဟားဗတ်ယန္တရား) ကို အသုံးပြု. မိ7ကျော်μl / hemisphere ။ ΔJunD (ယှဉ်ပြိုင်ΔFosBနှင့်အတူ heterodimerizing နှင့်ဤအရပ်မှပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ကမကထဒေသများအတွင်းက AP-1 ဒေသမှΔFosB၏စည်းနှောင်တားဆီးသဖြင့်ΔFosB-mediated ကူးယူလျော့ကျWinstanley et al ။ , 2007; အိုး et al ။ , 2010b) ။ ΔJunDΔFosBမှမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူချည်နှောင်သော်လည်း, ကΔJunDများ၏လေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုအချို့နဲ့အခြား AP-1 ပရိုတိန်း antagonizing ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ΔFosBအဆိုပါစမ်းသပ်ပြီးအခြေအနေများ (အောက်မှထုတ်ဖော်ပြောဆိုမြင်သာထင်သာ AP-1 ပရိုတိန်းကြောင်းပေါ်လာသည်အိုး et al ။ , 2010b) ။3နှင့်4ရက်သတ္တပတ်များအကြားအကြာတွင်တိရိစ္ဆာန်များ4ဆက်တိုက်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့သို့မဟုတ်4အုပ်စုများကိုဖန်တီးရန်နုံကျန်ရစ်: လိင်နုံ GFP, လိင်ကြုံတွေ့ GFP, လိင်နုံΔJunDနှင့်လိင်ΔJunDခံစားခဲ့ရသညျ။ လိင်အတွေ့အကြုံကို4ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက် session ရဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် diOlistics အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆေးထိုးဆိုဒ်များ verification (ဖျော်ဖြေခဲ့သည်အိုး et al ။ , 2010b) ။ NAc အပိုင်း (Coronal; 100 μm) GFP များအတွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအား-လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် (1: 20,000; ယုန် Anti-GFP antibody ကို; Invitrogen) ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပြန့်ပွားအဓိကရန်အပိုဆောင်းပြန့်ပွားနှင့်တကွ, NAc ၏ shell ကိုတစျပိုငျးကိုမှအဓိကအားကန့်သတ်ခဲ့သည်။
D1R / D2R ရန်။
အထီးကြွက် ketamine (0.1 / ml ကို mg) နှင့် xylazine (87 / ml ကို mg) ၏တစ်ဦး intraperitoneal ဆေးထိုး (13 ml / ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူ anesthetized နှင့် stereotaxic ယန္တရား (Kopf တူရိယာ) သို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံ 21-gauge လမ်းညွှန် cannulas (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ) ML ± 1.7 bregma ကနေ AP + 1.2 မှာ NAc ဆီသို့လျှော့ချကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဦးခေါင်းခွံနှင့်ဦးခေါင်းခွံသို့သတ်မှတ်ထားသုံး screw နှစ်ခုမှလိုက်နာသွား acrylic နှင့်အတူလုံခြုံထံမှ -6.4 DV ။ တိရစ္ဆာန်များတစ်2တပတ်ပြန်လည်နာလန်ထူကာလအတွင်းပြုတ်ရည်လုပျထုံးလုပျနညျးမှလေ့နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ တဆယ်မိနစ်လက်ခံအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်4နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ start မှီ, အထီးကြွက် D1R ရန် R ကို (+) SCH-23390 Hydrochloride (Sigma-Aldrich) ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် microinjections လက်ခံရရှိ, D2 အဲဒီ receptor (D2R) ရန် S- ( 0.9 တစ်စီးဆင်းမှုနှုန်း, (10 hemisphere နှုန်းμl) 1% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း), သို့မဟုတ်ဆား; 0.9 အတွက် 1.0 μgမှာတစ်ခုချင်းစီ hemisphere နှုန်းμl; -) eticlopride Hydrochloride (Sigma-Aldrich) မြုံဆား (1.0% အတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးပျံ့နှံ့ဘို့ရာအရပျ၌ကနျြထိုး cannula နှင့်အတူ 1 မိလိုက်တဲ့ 1 မိကြားကာလကျော်μl / မိ။ 0.5 μl၏တာဟာ Shell ဖို့ကန့်သတ်သို့မဟုတ် core ကို subdivisions (နေကြသည်အတိုင်းဤဆေးထိုး၏အသံအတိုးအကျယ်, core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးမသွားအောင်ပါလိမ့်မယ်Laviolette et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါဆေးညွှန်းကဤသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူ (ထိခိုက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံခဲ့ကြLaviolette et al ။ , 2008; ရောဘတ် et al ။ , 2012) ။ ထိန်းချုပ်ရေးယောက်ျားလိင်နုံကျန်ရစ်ပေမယ့်4နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း, အချည်းနှီးသောစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာနေရာချထားမတိုင်မီအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ဆားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ် session တစ်ခုပြီးနောက်, ယောက်ျား Amph ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ကျောရိုးနှင့်ΔFosBခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အခြားစမ်းသပ်မှုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့လေးအစည်းအဝေးများထက်ငါးအစည်းအဝေးများများအသုံးပြုမှုသည်ထပ်ခါတလဲလဲတာဟာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် NAc မှအလွန်အကျွံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပပျောက်ခြင်းနှင့်အရှင်ကျောရိုးနှင့်ΔFosBခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ခွင့်ပြုပါရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုထင်ရှားမဟုတ်ခဲ့, နှင့်ကျောရိုး၏လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆား-ထုံမွှန်းတိရစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက်ΔFosBယခင်စမ်းသပ်ချက်များတွင် Non-ပြုတ်ရည်အုပ်စုများအဖြစ်အလားတူဒေတာပြသခဲ့သည်။ မှာသတ်မှတ်ထားအရေးပါမှုနှင့်အတူနှစ်ယောက်လမ်း ANOVA နှင့် Holmes-Sidak နည်းလမ်း p <0.05 ကိုလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံ - သွေးဆောင်ပံ့ပိုးဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လိင်အတွေ့အကြုံရှိ-သွေးဆောင်ΔFosB upregulation ကြာရှည်ဖြစ်ပါသည်
ပထမဦးစွာΔFosBစကားရပ်များတွင်လိင်အကြားယာယီဆက်စပ်မှုကြုံတွေ့-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများသည် NAc အတွက် dendritic ကျောရိုးနှင့် Amph-CPP ကအထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် (7 သို့မဟုတ် 28 ဃ) မှ abstinence ၏တိုတောင်းခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအပြီးတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကက5နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအထူးသ NAc (ထဲမှာ, mesolimbic စနစ်ကတစ်လျှောက်လုံးΔFosBတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းစေသရုပ်ပြခဲ့သည်Wallace et al ။ , 2008; အိုး et al ။ , 2010b) ။ ဤအအတိတ်ကလေ့လာမှုများမှာတော့ΔFosBအဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူပြီးနောက် 1 ဃအတွင်းတိုင်းတာခဲ့ကြသည်, ထိုသို့ΔFosBစုဆောင်းခြင်းဆုလာဘ် abstinence ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလပြီးနောက်တည်မြဲမှုရှိမရှိမသိရခံခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ထားတဲ့ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့အထီး, 1 နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏နောက်ဆုံးအပြီး 7, 28, ဒါမှမဟုတ်5ဃ perfused ခဲ့ကြသည်။ လိင်နုံထိန်းချုပ်မှု5နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်အစည်းအဝေးများ၏နောက်ဆုံးအပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာ perfused ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုအားလုံးအချိန်အချက်များမှာလိင်နုံထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြ (သဖန်းသီး။ 1A, အခွံ; 1 ဃ, p = 0.022;7ဃ, p = 0.015; သဖန်းသီး။ 1B: core ကို; 1 ဃ, p = 0.024;7ဃ, p <0.001; ၂၈, p <0.001), 28dabstinence ပြီးနောက် NAc shell ကိုမှလွဲ။ (p = 0.280) ။ ထို့ကြောင့်ΔFosB upregulation ကအနည်းဆုံး 28 ဃတစ်ခုကာလအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် abstinence ကာလအတွင်းဆက်ရှိနေသေး။
လိင်အတွေ့အကြုံကိုΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်အရေအတွက်တစ်ခုချက်ချင်းမြဲတိုးစေ၏။ (ထို NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်အရေအတွက်၏ပြောင်းလဲမှုကိုခေါက်A) နှင့် core ကို (B) လိင်ကတွေ့ကြုံ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်နုံ (အဖြူ) ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (n =4အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ) ။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ *p <0.05, နုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ Naive 1 of ၏ပုံရိပ်များC), Exp 1 ဃ (D), Exp7ဃ (E), နှင့် Exp 28 ဃ (F) ။ AC, anterior commissure ။ စကေးဘား, 100 μm။
အိုး et al ။ (2010a) ယခင်ကဆုလာဘ် abstinence ၏ NAc shell ကိုနှင့် core ကိုအာရုံခံ (အပေါ်သိသိသာသာတိုးလာ dendritic အကိုင်းနှင့်အ dendritic ကျောရိုးအရေအတွက်စေသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ7ဃသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်း Golgi impregnation နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး, ဒါပေမယ့်ဃ 1 မဟုတ်အစီရင်ခံတင်ပြအိုး et al ။ , 2010a) ။ ဤတွင်, လိင်နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက် spinogenesis နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်7ဃသို့မဟုတ် 28 ဃဖြစ်စေလေ့လာခဲ့သည်။ တစ်ဦး diOlistics တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. လက်ရှိတွေ့ရှိချက်တစ်ခု7ဃလိင် abstinence ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်များကိုတိုးမြှင့်အတည်ပြုF(1,8) = 9.616, p = 0.015; သဖန်းသီး။ 2A-C ကို) ။ အထူးသ dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်သိသိသာသာကို (NAc shell ကိုနှင့် core ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်သဖန်းသီး။ 2A: အခွံ, p = 0.011; အဓိက, p = 0.044) ။ သို့သော်ဤတိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ (ယာယီကြီးမရှိတော့ NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းဖြစ်စေများတွင် 28 ဃတစ်ကြာရှည်လိင် abstinence ကာလပြီးနောက်တွေ့ရှိသဖန်းသီး။ 2B).
လိင်အတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးဟာ NAc အတွက် dendritic ကျောရိုး၏အရေအတွက်တိုးများနှင့်ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်စေသော. A, B,7ဃ၏ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် dendritic ကျောရိုးအရေအတွက် (A) သို့မဟုတ် 28 ဃ ([အဖြူ] လိင်နုံ၏ DB နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ [အနက်ရောင်] တိရိစ္ဆာန်များ; n =4သို့မဟုတ် 5) ။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ #p <0.05, နုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ C, ကိုယ်စားလှယ် dendritic နုံ7ဃထဲကနေ segments များနှင့် Exp7ဃအုပ်စုများကျောရိုးသိပ်သည်းဆတွက်ချက်ရန်လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စကေးဘား,3μm။ D, လိင် (အဖြူ) နုံသို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များများအတွက် Post-စမ်းသပ်အနုတ်အဆိုပါ pretest (CPP ကရမှတ်) စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းထဲက (Amph သို့မဟုတ်ဆား) တွင်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက်7ဃသို့မဟုတ် 28 ဃဖြစ်စေစမ်းသပ်ပြီးသို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်နုံ-Sal (7 ဃ; session ကိုကိုင်တွယ် n = 8), ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် Amph (7 ဃနုံ; n = 9), Exp-Sal (တိရစ္ဆာန်များ၏ပေါင်းစပ်အုပ်စုများမိတ်လိုက်ပြီးနောက်7ဃသို့မဟုတ် 28 ဃဖြစ်စေစမ်းသပ်ပြီး; n = 7),7ဃ Exp Amph (7 ဃအဖော်ရှာသောနောက်, n = 9), နှင့် 28 ဃ Exp Amph (28 ဃအဖော်ရှာသောနောက်, n = 11) ။ Sal အုပ်စုများ sal နှစ်ဦးစလုံးအခန်းတို့နှင့်အတူတွဲကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ *p <0.05, လိင်အတွေ့အကြုံရှိသောဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။
လိင်ကြုံတွေ့-သွေးဆောင်ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်ရှည်တည်မြဲဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့အရင်က abstinence ၏ 7-10 ဃသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကပိုကောင်း Amph ဆုလာဘ်အတွက်ရလဒ်ကြောင့်သရုပ်ပြ (အိုး et al ။ , 2010a) ။ အထူးသလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များလိင်နုံထိန်းချုပ်မှုအတွက် CPP ကသွေးဆောင်မ Amph ၏အနိမ့်ဆေးများများအတွက်သိသာသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) (0.5 သို့မဟုတ် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခု7d အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် 28 ဃလိင် abstinence ကာလ (အပြီးနှစ်ဦးစလုံးလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့် Amph ဆုလာဘ်သရုပ်ပြသည်ဤသည်ယခင်ရလဒ်များကအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့်တိုးချဲ့သဖန်းသီး။ 2D; F(2,24) = 4.971, p = 0.016) ။ အထူးသ7သို့မဟုတ် 28 ဖြစ်စေဃ abstinence ကာလနှင့်အတူလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များကို (နှစ်ဦးစလုံးအခန်းဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလိင်ကြုံတွေ့အနုတ်လက္ခဏာထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် Post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း Amph-တွဲအခန်းသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်ကုန်သဖန်းသီး။ 2D:7ဃ Exp AMPH vs Exp-Sal, p = 0.032; 28 ဃ Exp AMPH vs, p = 0.021) ။ ယခင်တွေ့ရှိချက်အတည်ပြု, လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များ Post-စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း Amph-တွဲအခန်းပိုပြီးအချိန်ကိုမဖြုန်းခဲ့ပါနဲ့ (လိင်နုံဆားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကနေ preference ကိုအတွက်ကွဲပြားဘူးသဖန်းသီး။ 2D()အိုး et al ။ , 2010a).
ΔFosBလှုပ်ရှားမှုလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ထိခိုက် Amph အကျိုးသည်အလွန်အရေးကြီးသည်
ရလဒ်အရှင်ဝေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကပိုကောင်း Amph ဆုလာဘ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း NAc အာရုံခံအတွက်ΔFosB၏ကြာရှည်စုဆောင်းခြင်းစေသရုပ်ပြ။ တိုးမြှင့်ΔFosBလှုပ်ရှားမှုΔFosB-mediated ကူးယူဖိနှိပ်ကြောင့်ΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်စည်းနှောင်မိတ်ဖက် (ΔJunD, ပိုကောင်း Amph အကျိုးသည်အရေးပါရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်Winstanley et al ။ , 2007), (ပု NAc အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမှတဆင့် overexpressed ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3A,B) ။ အဆိုပါ Amph CPP ကစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များ NAc အတွက်ΔJunDဖော်ပြခြင်းဖြင့်ΔFosBလှုပ်ရှားမှုကို attenuation တိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်7ဃလိင်ဆုလာဘ် abstinence ၏ဆိုးကျိုးများကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြသ လိင်ကြုံတွေ့ΔJunDတိရိစ္ဆာန်များ (Amph များအတွက်သိသာထင်ရှားသော CPP ကဖွဲ့စည်းမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်နုံΔJunDတိရိစ္ဆာန်များကှာခွားဘူးသဖန်းသီး။ 3B) ။ လိင်နုံ GFP ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် CPP ကရမှတ်များကညွှန်ပြအဖြစ်မတူဘဲ, လိင်ကြုံတွေ့ GFP ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (Amph များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3B, p = 0.018) ။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBလှုပ်ရှားမှု Attenuating လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc ကျောရိုး၏အရေအတွက်ထိခိုက် AMPH ဆုလာဘ်များနှင့်တိုးပိတ်ဆို့. A, recombinant adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်-ΔJunDတစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိသုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် GFP စကားရပ်၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံများ, (လက်ဝဲ) သေးငယ်တဲ့ (အလယ်) အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစား (ညာ) ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များသရုပ်ဖော်, အနျူကလိယ accumbens မှာညွှန်ကြားခဲ့သည်။ AC, anterior commissure; LV, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle ။ စကေးဘား, 250 μm။ B, ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့၏အထင်ရှားဆုံးနေရာများကိုနှင့်ပုံစံများသိထားပုံဥပမာ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, GFP shell ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဓိကပြန့်နှံ့ variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Cအချိန်များ၏ပမာဏကိုဖြစ်စေ GFP ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းချက်ကိုတစ်ဦးဆေးထိုးခံသောလိင် (အဖြူ) နုံများနှင့်ကြုံတွေ့ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များ (နုံ, များအတွက် Post-စမ်းသပ်အနုတ်အဆိုပါ pretest (CPP ကရမှတ်) စဉ်အတွင်း Amph-တွဲအခန်းသုံးစွဲ n = 9; Exp, n = 10) သို့မဟုတ်ΔJunDအားနည်းချက်ကို (နုံ, n = 9; Exp, n = 9) ။ D, လိင်ကြုံတွေ့ GFP နှင့်ΔJunDထံမှ dendritic segments များ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေကျောရိုးသိပ်သည်းဆတွက်ချက်ရန်လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စကေးဘား,3μm။ Eအဆိုပါလိင်နုံ၏ NAc (အဖြူ) နှင့်လည်းကောင်း GFP ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းချက်ကိုသို့မဟုတ်ΔJunDအားနည်းချက်ကိုတစ်ဦးဆေးထိုးခံသောကြုံတွေ့ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များအတွက် dendritic ကျောရိုး၏အရေအတွက်။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ *p <0.05, နုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ #p <0.05, GFP နှင့်သိသိသာသာခြားနားချက်ထိန်းချုပ်မှုကြုံတွေ့။
ΔJunD overexpression ၏ attenuating သက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဝယ်ယူကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပြတ်တောက်၏ရလဒ်ကြဘူး။ အဆိုပါ NAc အတွက်ΔJunD၏ expression ယခင်က (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြသထားသည်အိုး et al ။ , 2010b) ။ အမှန်မှာဒီလက်ရှိစမ်းသပ်မှုအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ GFP ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (မိတ်လိုက်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်, မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုတွေစတုတ္ထဆက်တိုက်တစ်နေ့တာအတွင်းပိုမိုတိုတောင်း mount မှ latency, intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, နည်းပါးလာတောင်ပေါ်နှင့် intromission ပြသစားပွဲတင် 1) ။ ဆနျ့ကငျြ, ΔJunD-ထိုးသွင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုပထမဦးဆုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမိတ်လိုက်၏စတုတ္ထတစ်နေ့တာအတွင်းတောင်ပေါ်၏နံပါတ်များကို mount သို့မဟုတ် intromission သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းမှသိသိသာသာတိုတောင်း latency မပြခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် NAc သို့ΔJunDတာဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကို attenuated ။ သို့သော်မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုမဆိုစဉ်အတွင်း GFP ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ΔJunD-ထုံမွှန်းအုပ်စုများအကြားမိတ်လိုက် parameters များကိုမဆိုမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု Amph ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ာင်းအပေါ်ΔJunDတာဟာ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏ရလဒ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, ရှိခဲ့သည် မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကိုနှုန်း se (စားပွဲတင် 1).
GFP- သို့မဟုတ်ΔJunD-ဖော်ပြဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏ NAc တာဟာလက်ခံရရှိကြောင်းအုပ်စုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှာမှီးနေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parametersa
ΔFosB NAc dendritic ကျောရိုးထဲမှာလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးဘို့အရေးကြီးသည်
ΔFosBလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်7ဃလိင်ဆုလာဘ်နေကြပြီး NAc အာရုံခံ၏တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆလိုအပ်ခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 3C,D) ။ CPP ကအတှကျအထကျဖျောပွထားတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက်ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, Two-လမ်း ANOVA (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနှစ်ဦးစလုံး၏သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများပြသF(1,34) = 31.768, p <0.001) နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုကုသမှု (F(1,34) = 14.969, p = 0.001), အဖြစ်အပြန်အလှန် (F(1,34) = 10.651, p = 0.005) ။ အထူးသလိင်အတွေ့အကြုံရှိ GFP ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (လိင်နုံ GFP ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် NAc ကျောရိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုခဲ့သဖန်းသီး။ 3D: p <0.001), ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်တွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြု (အိုး et al ။ , 2010a) ။ (မတူဘဲ, လိင်ကြုံတွေ့ΔJunDတိရိစ္ဆာန်များလိင်နုံΔJunDအုပ်စုများထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမနှင့်လိင်ကြုံတွေ့ GFP ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 3D: p <0.001) ။ ထို့ကြောင့် NAc အတွက်ΔJunDစကားရပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် NAc spinogenesis အပေါ် abstinence ကိုဆုချခြင်းဖြစ်သည်။
D1R ရန်လုပ်ကွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosB upregulation
မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R သို့မဟုတ် D2R activation လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ΔFosB upregulation နှင့်ထိခိုက် Amph ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 1 တစ်ခုချင်းစီရှေ့တော်၌ထို NAc2မိသို့ D15R သို့မဟုတ် D4R ရန် (သို့မဟုတ်ဆား) ဖြစ်စေ၏ဒေသခံတာဟာလက်ခံရရှိ နေ့စဉ်ဆက်တိုက်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ။ အရေးကြီးတာက, D1R မဟုတ်သလို D2R မရန်တာဟာမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမဆိုကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ NAc ထိခိုက်နစ်နာစတင်သို့မဟုတ်စကားရပ်သို့ (သဖန်းသီး။ 4D-F ကို) ။ အလားတူပင် အားလုံးအုပ်စုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသရုပ်ပြအဖြစ် D1R သို့မဟုတ် D2R ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း, မိတ်လိုက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏စည်းရုံးရေးမှူးများသက်ရောက်မှုကိုတားဆီးမရ, နေ့4နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေ့က 1 အပေါ်ပိုမိုတိုတောင်းသုတ်ရည်လွှတ် latency ခြင်းဖြင့်သက်သေ (သဖန်းသီး။ 4F()F(1,40) = 37.113, p <0.001; ဆား p = 0.004; D1R ပုရွက်ဆိတ်, p = 0.007; D2R ပုရွက်ဆိတ်, p <0.001) ။
အဆိုပါ NAc သို့ထုံမွှန်း Dopamine အဲဒီ receptor ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ မှု Coronal NAc အပိုင်း (A+ 2.2; B+ 1.7; Cbregma ထံမှ + 1.2) အားလုံးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုညွှန်း။ Cannulas နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြသော်လည်းအဖြူအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ (နုံ-Sal ၏တင်ပြချက်များလွယ်ကူခြင်းအဘို့အတဖက်သတ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည် n = 7; Exp-ဆား; မီးခိုးရင့်ရောင်, n = 9; Exp D1R ပုရွက်ဆိတ်, အလင်းမီးခိုးရောင်, n = 9; အနက်ရောင် Exp D2R ပုရွက်ဆိတ်, n = 8) ။ AC, anterior commissure; LV, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle; CPU, caudate-putamen ။ တောင်ပေါ်ကအောင်းနေချိန် (D), intromission အောင်းနေချိန် (E), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (F), D1R ပုရွက်ဆိတ်အနက်ရောင်; မီးခိုးရောင်, D2R ပုရွက်ဆိတ်;) (ဆား, အဖြူရောင်အားလုံးလိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများသည်။ ဒေတာများကို± SEM ဆိုလိုကိုယ်စားပြုသည်။ *p <0.05, ကုသမှုအတွင်းတစ်နေ့နှင့် ၄ ရက်အကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။
ပြီးခဲ့သည့် NAc ပြုတ်ရည်များနှင့်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် NAc7ဃအတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကို analysis သို့မဟုတ် session ကိုကိုင်တွယ် (နှစ်ဦးစလုံး NAc shell ကိုအတွက်အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှားF(3,29) = 18.070, p <0.001) နှင့် core ကို (F(3,29) = 10.017, p <0.001) ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဆား - ကူးစက်ထိန်းချုပ်မှုများတွင်လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်လိင်အရနုံထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် osFosB ကိုသိသိသာသာမြင့်တက်စေသည်။သဖန်းသီး။ 5A, အခွံ p <0.001; သဖန်းသီး။ 5B: core ကို, p <0.001), အထက်ရလဒ်များကိုအတည်ပြု။ D1R ၏ရန်လိုမှုသည် D2R သည်ဤ notFosB ၏ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုတားဆီးကာကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ပါးစေသည်။ NAc shell တွင်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောယောက်ျားများအားကုသသော D1R ရန်သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံထိန်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် osFosB-IR ဆဲလ်များတိုးတက်မှုမရှိပါ။သဖန်းသီး။ 5A: p = 0.110), နှင့်ΔFosBစကားရပ် (လိင်ကြုံတွေ့ဆားယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သဖန်းသီး။ 5A: p = 0.002) ။ အဆိုပါ NAc core ကိုခုနှစ်တွင် D1R ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်ခဲ့: ΔFosBသိသိသာသာ (နုံဆားထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် D1R ရန်-ကုသယောက်ျားအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5B: p = 0.031), ဒါပေမဲ့ဒီ upregulation (လိင်ကြုံတွေ့ဆားကုသယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သဖန်းသီး။ 5B: p = 0.012) ။ D2R ရန်လက်ခံရရှိကြောင်းလိင်ကြုံတွေ့အထီးနုံဆားထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်တစ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကိုခဲ့အဖြစ် D2R ရန်ကုသမှုΔFosBသော induction မထိခိုက်ခဲ့ပါသဖန်းသီး။ 5A: အခွံ, p <0.001; သဖန်းသီး။ 5B: core ကို, p <0.001) နှင့် D1R ရန်ပြုကုသခံရသောအထီး (သဖန်းသီး။ 5A: အခွံ, p <0.001; သဖန်းသီး။ 5B: core ကို, p = 0.013), နှင့်လိင်ကြုံတွေ့ဆားယောက်ျားထံမှကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ NAc အတွက် D1R ပိတ်ဆို့ခြင်းလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်အရေအတွက်ထဲမှာတိုး attenuates ။ (ထို NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB-မှာ IR ဆဲလ်အရေအတွက်၏ပြောင်းလဲမှုကိုခေါက်A) နှင့် core ကို (B) လိင်ကတွေ့ကြုံ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်နုံ (အဖြူ) ထိန်းချုပ်မှု (နုံ-Sal, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ n = 6; Exp-ဆား, n = 7; Exp D1R ပုရွက်ဆိတ်, n = 9; Exp D2R ပုရွက်ဆိတ်, n = 8) ။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ *p <0.05, နုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ #p <0.05, ဆားနှင့် D2R ပုရွက်ဆိတ်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ Naive Sal ပုံရိပ်များC), Exp Sal ​​(D), Exp D1R ပုရွက်ဆိတ် (E), နှင့် Exp D2R ပုရွက်ဆိတ် (F) ။ AC, anterior commissure ။ စကေးဘား, 100 μm။
အဆိုပါ dorsal striatum သို့ D1R သို့မဟုတ် D2R ရန်၏အလားအလာပြန့်ပွားဘို့ထိန်းချုပ်ဖို့, ΔFosBစကားရပ် psychostimulants နှင့် opiates အားဖြင့် dorsal striatum အတွက်ΔFosB၏ induction D1R အပေါ်မှီခိုဖြစ်သကဲ့သို့ချက်ချင်း, အ NAc နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle ကပ်လျက်မှ dorsal တစ်ဦးဧရိယာ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် လှုပ်ရှားမှု (Zhang က et al ။ , 2002; Muller နှင့် Unterwald, 2005) ။ Exp-Sal vs 35.6 ± 4.8: လိင်အတွေ့အကြုံကိုဆား-ကုသယောက်ျားအတွက် dorsal striatum (နုံ-Sal အတွက်ΔFosB-ir ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုတိုးမြှင့် 82.9 ± 5.1; p <0.001), ငါတို့ယခင်အစီရင်ခံစာအတည်ပြု (အိုး et al ။ , 2010b) ။ ; Exp-D1R2± 1 ir ဆဲလ်: ထို့အပြင် NAc သို့ D82.75R မဟုတ်သလို D2.64R ရန်တာဟာမလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်ΔFosB (Exp-D2R ထိခိုက် 83.9 ± 4.4 ir ဆဲလ်; p <0.001) Naive-Sal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်များကရန်ပြန့်ပွားမှုပြန့်ပွားမှုသည်အဓိကအားဖြင့် NAc ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
NAc လုပ်ကွက်များတွင် D1R ရန် Amph ဆုလာဘ် sensitized
မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း NAc အတွက် D1R ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုလည်းနောက်ဆုံး NAc ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်7ဃစမ်းသပ်ပြီး, လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်ပိတ်ဆို့ နှင့်မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှု (F(3,29) = 2.956, p = 0.049) ။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း NAc အတွက်ဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (လိင်နုံယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု Amph-တွဲအခန်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲသဖန်းသီး။ 6A, p = 0.025), အထက်ရလဒ်များကိုအတည်ပြု။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc D1R ရန် Amph များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းမပြုခဲ့လက်ခံရရှိကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များခံစားခဲ့ရသညျ။ သူတို့ (လိင်နုံထိန်းချုပ်မှုကှာခွားနှင့်ဆားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု Amph-တွဲအခန်းသိသိသာသာလျော့နည်းအချိန်ကုန်ဘူးသဖန်းသီး။ 6A: p = 0.049) သို့မဟုတ် D2R ရန် (သဖန်းသီး။ 6A: p = 0.038) လိင်ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောက်ျားထုံမွှန်း။ NAc D2R ရန်တာဟာနှင့်အတူလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များနုံဆားထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာ Amph-CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့အဖြစ် D2R ရန်တာဟာတိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်မထိခိုက်ခဲ့ပါသဖန်းသီး။ 6A: p = 0.040) နှင့် D1R ရန်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ (သဖန်းသီး။ 6A: p = 0.038), နှင့်လိင်ကြုံတွေ့ဆားယောက်ျားထံမှကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ NAc အတွက် D1 receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်များနှင့်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့် dendritic ကျောရိုး abolishes ။ Aလိင်နုံများအတွက် Post-စမ်းသပ်အနုတ်အဆိုပါ pretest (CPP ကရမှတ်, စက္ကန့်) အတွင်း Amph-တွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်, ပမာဏ (အဖြူ, n ဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်း = 6) နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များ (n = 7), D1R ရန် (n = 9), သို့မဟုတ် D2R ရန် (n = 8) ။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ *p <0.05, နုံဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ #p <0.05, D1R ပုရွက်ဆိတ်နှင့်သိသိသာသာခြားနားချက်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ။ Bလိင်ကနုံအဘို့ (10 μmနှုန်း) dendritic ကျောရိုး၏, အရေအတွက်မှာ (အဖြူ, n ဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်း = 7) နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ (အနက်ရောင်) တိရိစ္ဆာန်များ (n = 8), D1R ရန် (n = 8), သို့မဟုတ် D2R ရန် (n = 8) ။ ဒေတာများကိုအုပ်စုတစ်စု± SEM ဆိုလိုဖြစ်ကြသည်။ *p <0.05, နုံဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာခြားနားချက်။ #p <0.05, အတွေ့အကြုံရှိဆားထိန်းချုပ်မှုကနေသိသိသာသာခြားနားချက်။
D1R ရန်ကုသမှုလုပ်ကွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် NAc spinogenesis
ဤအတူညီတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၏ analysis (မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း D1R activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ဆုလာဘ် abstinence ၏7ဃပြီးနောက်တိုးမြှင့် NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆလိုအပ်ခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သသဖန်းသီး။ 6B; F(3,26) = 41.558, p <0.001) ။ အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့် D2R ရန်လိုသောတိရိစ္ဆာန်များသည်လိင်အရနုံပါ ၀ င်သောဆားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျောရိုးများသိသိသာသာများပြားသည်။သဖန်းသီး။ 6B: p <0.001) ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်တွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြု (အိုး et al ။ , 2010a) နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ GFP ထိန်းချုပ်မှုဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်နှင့်အတူတွေ့ရှိချက်။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်အတွေ့အကြုံရှိ D1R ရန်-ထုံမွှန်းတိရိစ္ဆာန်များ (လိင်နုံဆား-ထုံမွှန်းထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားဘူးသဖန်းသီး။ 6B) ။ D2R ထုံမွှန်းတိရိစ္ဆာန်များ (လိင်ကြုံတွေ့ဆားထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျောရိုးထုပြသခဲ့သည်အဖြစ် D2R ရန်ပြုတ်ရည်တစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 6B: p = 0.02), ဒါပေမဲ့ကျောရိုး၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားနံပါတ်များကိုလိင်နုံဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့် D1R-ကုသအတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (နှိုင်းယှဉ်p <0.001; သဖန်းသီး။ 6B) ။ ထို့ကြောင့်မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R ပိတ်ဆို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုပိတ်ဆို့နှင့် NAc spinogenesis အပေါ် abstinence ဆုချ။
သဘာဝဆုလာဘ် abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်အခါလက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အထူးသကျနော်တို့ abstinence ၏7သို့မဟုတ် 28 ဃသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို, ပိုကောင်း Amph ဆုလာဘ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းပြသ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ထိုပေါက်ဖွားအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဦးထံမှ abstinence ကာလ၏ထူထောင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတူညီကြlu et al ။ , 2005; သောမတ်စ် et al ။ , 2008; ဝံပုလွေ, 2010b, 2012; Xue et al ။ , 2012). ထို့အပွငျ, သဘာဝဆုလာဘ်-သွေးဆောင်အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBဆုလာဘ် abstinence တစ်ကာလအတွင်းအလားအလာဟာ NAc အတွက် spinogenesis ကနေတဆင့်, psychostimulant ဆုလာဘ်အပေါ်ကိုသဘာဝဆုလာဘ် abstinence ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive သက်ရောက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းတည်မြဲ-ရှည်လျားမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း NAc D1R လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အလှည့်၌, NAc ၌ဤ D1R-mediated ΔFosB upregulation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်ဤရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ထံမှ abstinence တဲ့ကာလပေါ်မှာမှီခိုနေကြသော်လည်း, Amph များအတွက်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်နှင့် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆများအတွက်အရေးပါဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ် (အိုး et al ။ , 2010a) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ NAc spinogenesis ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်၏ကနဦးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါပြသပေမယ့် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆယာယီနှင့်တစ်ဦး7ဃပြီးနောက်ရှုလေ့လာဖြစ်သကဲ့သို့, တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များဆက်လက်စကားရပ်များအတွက်အရေးပါသည်မဟုတ်, ဃ, abstinence ကာလ 28 မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာတာရှည် dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူ, စဉ်အတွင်း NAc အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကျခံအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအပျေါမှာ, အ NAc အတွက် extracellular dopamine (အဖော်ရှာစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်Fiorino et al ။ , 1997). လက်ရှိလေ့လာမှုမိတ်လိုက်နေစဉ် NAc သို့ dopamine အဲဒီ receptor ရန် infusing dopamine နှုန်း se ဆုလာဘ်အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတှငျပါဝငျမဟုတ်ကြောင်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်သို့မဟုတ် performance ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းပြသပေမယ့်အစား လိင်-related တွေကိုမက်လုံးပေး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့ (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ အဆိုပါ dopaminergic အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဆဲလ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်အပါအဝင် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ်စနစ်ကသည်, NAc (အတွင်းအာရုံခံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အကြောင်းမရှိ activation ၏အမှန်စင်စစ်တွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်Balfour et al ။ , 2004). ထပ်ခါတစ်လဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလှည့်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်အားဖြည့် (mediates သော NAc အတွက်ΔFosB, inducesအိုး et al ။ , 2010b). လက်ရှိရလဒ်တွေကိုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ΔFosB upregulation, အကယ်စင်စစ်, မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R activation အပေါ်မှီခိုကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ NAc အတွက် D1R ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံΔFosBတိုးပွားလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Lee က et al ။ , 2006; ကင်မ် et al ။ , 2009) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောΔFosB upregulation D1R Activite အပေါ်မှီခိုကြောင်း (Zhang က et al ။ , 2002). ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာ sensitized မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုသည်, striatum အတွက်အာရုံခံဖော်ပြ D1R အတွက်ΔFosB၏ overexpression ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမရှိခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် (Kelz et al ။ , 1999) ။ T ကHUS, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ sensitize တစ် D1R-မှီခိုယန္တရားမှတဆင့် NAc အတွက်ΔFosBတိုးမြှင့်။
ထို့အပြင်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ΔFosBသဘာဝကဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံနှင့် psychostimulant ဆုလာဘ်များအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏အရေးပါသောအာမခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မှတ်ချက်ချအဖြစ် NAc အတွက်ΔFosB overexpression ကြိုတင်စူးရှသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဖို့ locomotor activation sensitizes သကဲ့သို့, NAc အတွက်ΔFosBလှုပ်ရှားမှုယခင်က (ထိခိုက်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးKelz et al ။ , 1999), (ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ sensitivity ကိုတိုးပွားစေKelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006), နှင့်ကိုကင်းများ၏အနိမ့်ဆေးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်စေ (Colby et al ။ , 2003) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R သို့မဟုတ်ΔFosBလှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ Amph ဆုလာဘ်၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ာင်းဖျက်သိမ်းကြောင်းပြသထားတယ်။
ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတူတူပင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံမသာ, သူတို့ကအတူတူပင်မော်လီကျူးပြုပြီအပေါ်ဆုံ (Nestler et al ။ , 2001; Wallace et al ။ , 2008; ခွံရှိ et al ။ , 2009; အိုး et al ။ , 2010b), နှင့် NAc အတွက်တူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်ဖွယ်ရှိ (Frohmader et al ။ , 2010b), t ကိုဏပုမက်လုံးပေး salience သြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ "လို" (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998).
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အနေဖြင့်တစ်ဦး abstinence ကာလ Amph ဆုလာဘ်များနှင့် NAc spinogenesis ၏ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ငါတို့သည်ဤ abstinence ကာလအတွင်းΔFosB spinogenesis အစပျိုးခြင်းနှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပြောင်းလဲပစ်မှမြစ်အောက်ပိုင်းဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲနေဖြင့်အာရုံခံ function ကိုထိခိုက်စေသော hypothesize. အမှန်စင်စစ်မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction ပိတ်ဆို့ခြင်းဆုလာဘ်နေကြပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် NAc အတွက်တိုးချဲ့ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတားဆီး။ ထို့အပြင်စီမိတ်လိုက် session ကိုရှေ့တော်၌ထို NAc သို့ D1R ရန်၏ပြုတ်ရည်ΔFosBအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးနှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတားဆီး။
ΔFosBသော NAc အတွက်အလှည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် Synaptic ခွန်အား၌ may ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇတစ်ခုများပြားလှ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်မှတ်တမ်း Active သို့မဟုတ် repressor အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသောကူးယူအချက်ဖြစ်ပါသည် (Nestler, 2008) ။ ပိုများသောအထူးသ, ΔFosBသိသိ-မှီခို kinase-5 မြှင့်လုပ်ဆောင် (Bibb et al ။ , 2001; Kumar က et al ။ , 2005), နြူကလီးယားအချက်κ B က (အဲန်အက်ဖ်-κB) (Russo et al ။ , 2009b), နှင့်အချိုမှု AMPA အဲဒီ receptor ၏ GluA2 subunit (Vialou et al ။ , 2010) နှင့် rချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos ၏ epresses ကူးယူ (အိုး et al ။ , 2010b) နှင့် histone methyltransferase G9 (ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ ကို Cyclic-မှီခို kinase-5 cytoskeletal ပရိုတိန်းနှင့် neurite outgrowth ထိန်းညှိ (တေလာ et al ။ , 2007). အဲန်အက်ဖ်-κB၏တားစီး Basal dendritic ကျောရိုးနှင့်လုပ်ကွက်ကျောရိုးထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးလျော့နည်းသွားသော်လည်းထိုမှတပါး, သက်ဝင်အဲန်အက်ဖ်-κB, အ NAc အတွက် dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်တိုးပွါး (Russo et al ။ , 2009b). ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မျိုးစုံပစ်မှတ် (ဆိုလိုသည်မှာသိသိ-မှီခို kinase-5, အဲန်အက်ဖ်-κB) မှတဆင့်ကတွေးဆခဲ့သည်အဖြစ်ခြုံငုံအကျိုးဆက်, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် sensitized ကြောင်း NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအရာ NAc အတွက်ΔFosB, တိုးပွါး Russo et al ။ (2009a) ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းများ၏လုပ်ရပ်များသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာမျှော်လင့်မထားသောလေ့လာရေးအတွက် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆယာယီဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်မဟုတ်တော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် 28 ဃမှာရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်စတင်ခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်ကနဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတသို့မဟုတ်ထိခိုက် Amph တုံ့ပြန်မှုများ၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်အထောက်အကူပြုပေမည်။ သို့သော်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကြာရှည် abstinence ကာလပြီးနောက်ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်တွေရဲ့ဇွဲဘို့မလိုအပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကဆုလာဘ် abstinence ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအပြီးတွင်အခြေခံအဆင့်ဆင့်သို့ပြောင်းသော NAc အတွက် NMDA အဲဒီ receptor subunit ရော်ဘာ-7 ၏ရေတိုရေရှည် (28, ဒါပေမယ့်မရ 1, ရက်အတွင်းနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက်) တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပြခဲ့ကြ (အိုး et al ။ , 2012). ဤသည် NMDA အဲဒီ receptor စကားရပ်လိင်အတွေ့အကြုံရှိ-သွေးဆောင်အသံတိတ် synapses ၏ညွှန်ပြဖြစ်တွေးဆခဲ့သည်တိုးလာ (Huang က et al ။ , 2009; ဘရောင်း et al ။ , 2011; အိုး et al ။ , 2012), နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ကျောရိုးတိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန် NMDA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသောဖြစ်နိုင်ခြေရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ (Hamilton က et al ။ , 2012).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှုသဘာဝဆုလာဘ် (လိင်) နှင့်အကျိုးကို abstinence ကာလအပေါ်မှီခိုနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်ဤအမူအကျင့် plasticity အဆိုပါ NAc အတွက် D1R activation မှတဆင့်ΔFosBကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ဒေတာဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်သဘာဝဆုလာဘ်ဆုံးရှုံးမူးယစ်ဆေးစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ပါစေနှင့်ဤတိုးမြှင့်အားနည်းချက်များထဲမှဖျန်ဖြေΔFosBနှင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပစ်မှတ်ကြောင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ 16, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဒီဇင်ဘာလ 12, 2012 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဒီဇင်ဘာလ 23, 2012 ။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးသုတေသန (LMC) ၏ကနေဒါ Institutes, စိတ်ကျန်းမာရေး (EJN) နှင့်သဘာဝသိပ္ပံနှင့်ကနေဒါ၏အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီ (KKP နှင့် LMC) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ diOlistic တံဆိပ်ကပ် technique ကိုနှင့်အတူအကူအညီအတွက်ဒေါက်တာကက်သရင်း Woolley (Northwestern University) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာပေးစာယူဒေါက်တာ Lique အမ် Coolen, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဇီဝရူပဗေဒဌာန, မစ္စစ္စပီ Medical Center မှတက္ကသိုလ် 2500 မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်လမ်း, ဂျက်ဆင်, က MS 39216 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2013 စာရေးသူ 0270-6474 / 13 / 333434-09 $ 15.00 / 0
Chen က J ကို,
Svenningsson P ကို,
yan Z ကို,
Ouimet CC ကို,
Nairn AC အ,
Greengard P ကို
ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏ (2001) အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ 410: 376-380 ။
နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏ (2001) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience 21: 2123-2130 ။
Lee က BR,
mu P ကို,
Lin က Y ကို,
Ishikawa M က,
Huang က YH,
Shen H ကို,
dong Y ကို,
(2011) ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းတစ်ဦးကအသံတိတ် synapses-based ယန္တရား။ J ကို neuroscience 31: 8163-8174 ။
(2012) ကင်း abstinence နျူကလိယကိုကင်းနှင့်အ sucrose များအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းဒိုင်းနမစ်ပစ်ခတ် accumbens ပွောငျးလဲ။ EUR J ကို neuroscience 35: 940-951 ။
Chen က BT,
အဆိုပါ mesolimbic စနစ် (2010) Synaptic plasticity: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1187: 129-139 ။
Whisler K သည်,
Steffen ကို C,
ΔFosB၏ (2003) Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience 23: 2488-2493 ။
Forlano pm တွင်,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic လိင်ကွဲပြားမှုများ (2010) ဘက်စုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို comp Neurol 518: 1330-1348 ။
Vegas-Ramirez H ကို,
Zito K သည်
အသစ်က dendritic ကျောရိုး၏ (2012) လုပ်ဆောင်ချက်-မှီခိုတိုးတက်မှုနှုန်း proteasome နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 74: 1023-1030 ။
Chakravarty S က,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2009) Δ FosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ 8: 442-449 ။
မာရီ H ကို,
လျူ W က,
dong Y ကို
Vivo ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုခုနှစ်တွင် (2009) အသံတိတ် synapses ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 63: 40-47 ။
(2009) စွဲလမ်း၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်ဗြာ neuroscience 10: 561-572 ။
(2007) Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience 8: 844-858 ။
(2004) Memory နဲ့စွဲ: shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 44: 161-179 ။
Kelz ကို MB,
Carlezon WA ဂျူနီယာ,
Gilden L ကို,
Zhang က YJ,
Marotti L ကို,
Tkatch T က,
Surmeier DJ သမား,
ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက်ΔFosB၏ (1999) Expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ 401: 272-276 ။
ကင်မ် Y ကို,
Baron M က,
နျူကလိယ accumbens အတွက် (2009) Methylphenidate-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ΔFosBစကားရပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 106: 2915-2920 ။
စွဲလမ်း၏ (2010) Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35: 217-238 ။
Sun က N ကို,
Tan က H ကို
နျူကလီးယပ်အတွက် D2008 ကဲ့သို့ receptors နှိုင်းယှဉ် D1 ကဲ့သို့မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ (2) Dopamine shell ကိုနှိုင်းယှဉ် core ကို differential နီကိုတင်းဆုလာဘ် sensitivity ကို modulates accumbens ။ J ကို neuroscience 28: 8025-8033 ။
Lee က KW,
Helmin K သည်,
နျူကလိယ accumbens အတွက် D2006 နှင့် D1 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် (2) ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 103: 3399-3404 ။
(2005) လမ်းကြောင်းအချက်ပြဗဟို amygdala ERK ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားဖို့အရေးကြီးသည်။ နတ် neuroscience 8: 212-219 ။
(2011) Synaptic plasticity နှင့်စွဲ: သင်ယူခြင်းယန္တရားများကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီ။ Neuropharmacology 61: 1052-1059 ။
Covington HE 3rd ။ ,
စက်ပြင် M က,
Ren Y ကို,
Greengard P ကို,
Marinelli M က
(2011) ကယ်လ်ဆီယမ်-permeable AMPA receptors နျူကလိယရှိကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာသော်လည်းမစမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်းပြီးနောက် synapses accumbens ။ J ကို neuroscience 31: 5737-5743 ။
(2005) D1 dopamine receptors ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် striatum အတွက်ΔFosBသော induction modulate ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 314: 148-154 ။
စွဲလမ်း၏ (2008) မှတ်တမ်းယန္တရားများ: ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3245-3255 ။
(2001) ΔFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 98: 11042-11046 ။
Olausson P ကို,
Tronson N ကို,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2006) ΔFosBအစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 26: 9196-9204 ။
(2011) သဘာဝဆုလာဘ်, neuroplasticity နှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ Neuropharmacology 61: 1109-1122 ။
Hadeishi Y ကို,
Monteggia L ကို,
Robison B က,
Yazdani S က,
Knapp DJ သမား,
sim-Selley L ကို,
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBသော induction ၏ (2008) ထူးခြားသောပုံစံများ။ synapses 62: 358-369 ။
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2010b) ΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ 9: 831-840 ။
Gilpin L ကို,
က Parker Ke,
နျူကလိယ accumbens အတွက် (2012) Dopamine D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူမြင့်မားသောအကွာအဝေးကို run ဖို့ရပ်ကြီးကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးလျော့နည်းစေတယ်လေ။ Physiol ပြုမူနေ 105: 661-668 ။
စွဲလမ်းအတွက် (2009a) Neurotrophic အချက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 73-82 ။
Wilkinson ကို MB,
Clark ကက MS,
Barker PA ဆိုပြီး,
(2009b) နျူကလီးယားအချက်κBအချက်ပြအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 29: 3529-3537 ။
Sanchez H ကို,
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Cdk2007 ၏ (5) တားစီးသည့် locomotor-ကိုသက်ဝင်နှင့်ကိုကင်းများမက်လုံးပေး-စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 104: 4147-4152 ။
အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲအတွက် (2008) Neuroplasticity ။ br J ကို Pharmacol 154: 327-342 ။
AJ 3rd အလျင်စလို။ ,
Iñiguez SD က,
Ghose S က,
Rios L ကို,
(2008) သဘာဝကဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience 28: 10272-10277 ။
Werme M က,
Messer ကို C,
Olson L ကို,
Thorén P ကို,
Brené S က
(2002) Δ FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 22: 8133-8138 ။
orbitofrontal cortex အတွက် (2007) ΔFosBသော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience 27: 10497-10507 ။
(2010a) ကိုကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations ၏ဘာမြူဒါတြိဂံ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 33: 391-398 ။
dopamine နဲ့ကိုကင်းအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှု (2010b) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Neurotox Res 18: 393-409 ။
(2012) အာရုံကြောသိပ္ပံ: ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ သဘာဝ 481: 36-37 ။
Luo အဘိဓါန် YX,
ဝူ P ကို,
Shaham Y ကို,
lu L ကို
မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် relapse ကာကွယ်တားဆီးဖို့ (2012) တစ်ဦးကမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်း-သုဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ သိပ္ပံ 336: 241-245 ။
Zachary V ကို,
Shaw-Lutchman T က,
(2006) မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience 9: 205-211 ။
Zhang က D:,
Zhang က L ကို,
အဘိဓါန် Lou DW,
Nakabeppu Y ကို,
Xu M က
(2002) က dopamine D1 အဲဒီ receptor ကိုကင်း-သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ်များအတွက်အရေးပါဖျန်ဖြေသည်။ J ကို Neurochem 82: 1453-1464 ။
တစ်ဝတ္ထုဆုချမှ Aplysia အတွက် Synaptic plasticity ၏ပုံစံ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်အတွက်၎င်းတို့၏အလုပ်မဖြစ်၏ဖြစ်နိုင်သောပံ့ပိုးမှုများကို သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀ (၁၀) - ၅၈၀-၅၉၁